၂၀၂၀ တွင် Spotify ရှိအနုပညာရှင်များ၊ သီချင်းများနှင့် podcasts များကိုအများဆုံးနားထောင်ခဲ့သည် Androidsis
အများစုသည်အနုပညာရှင်များ၊ သီချင်းများနှင့် podcasts များဖြစ်သော ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Spotify ကိုနားထောင်ခဲ့ကြသည်
Manuel Ramirez | | Android application များ, အခမဲ့ဂီတ, NOTICIAS
ငါတို့ထဲဝင်တယ် ဒီဇင်ဘာနှင့် Spotify သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်သီချင်းများ၊ အနုပညာရှင်များနှင့် Podcasts များနားထောင်ခြင်းတွင်အများဆုံးစာရင်းဝင်သည်။ သူ့ကိုတကယ်သွားစေချင်သည့်တစ်နှစ်သော်လည်း၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုများစွာရရှိစေသည့်သီချင်းများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျန်စေခဲ့သည်။
ငါတို့တွေ့ခဲ့တယ် ငါတို့တိုင်းပြည်မှာအနုပညာရှင်အများဆုံးနားထောင်တဲ့အဖြစ် Bad Bunny Spotify အပေါ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လိုပဲ; နှင့်ဤမှတ်တိုင်အောင်မြင်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးစပိန်စကားပြော။ စပိန်အသုံးပြုသူများအကြားနံပါတ်တစ်နေရာကိုသွားရန် Nicki Minja နှင့် Tusa de KAROL G သို့သွားမည်။ ဤခရစ်စမတ်မှတ်တိုင်များနှင့်အခင်းအကျင်းများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်သီချင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်သင့်အားဆက်သွယ်ပေးမည်။
1 2020 ၏ရှင်ဘုရင်အဖြစ်မကောင်းတဲ့ Bunny
2 ဦး ခေါင်း Billie Eilish
5 ထို့အပြင် ၂၀၂၀ Spotify ၏အသံလွှင့်ချက်များအများဆုံးနားထောင်ခဲ့သည်
2020 ၏ရှင်ဘုရင်အဖြစ်မကောင်းတဲ့ Bunny
ယနေ့တွင် Spotify သည်၎င်း၏ဂီတ streaming ပလက်ဖောင်းမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်သီချင်းများနှင့်အနုပညာရှင်များအကြား၌အများဆုံးနားထောင်ခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုနေ့ရက်သည်ထိုနေ့ရက်ဖြစ်သည် ဒီနေ့ Spotify ဟာလူ ဦး ရေသန်း ၃၂၀ ရှိပြီးသူတို့ရဲ့ streaming တွေဖြစ်လာပြီ အကြိုက်ဆုံးပြီးသား မကောင်းတဲ့ Bunny ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အများဆုံးနားထောင်ဖြစ်လာသူစပိန်စကားပြောအနုပညာရှင်အဖြစ်။
အဲဒါကိုရှင်းပါတယ် စပိန်ဂီတသည်ပိုတိုရီကန်အနုပညာရှင်နှင့် ပို၍ ခေတ်စားသည် စုစုပေါင်းသန်း ၈.၃၀၀ သန်းနှင့်အတူရာဇ ၀ င်ရာဇဝင်ကိုယခုနှစ်အတွင်း Spotify တွင်နားထောင်သည်။
ငါတို့သွားရတော့မယ် ဒုတိယနေရာအတွက်အမေရိကန်ရက်ပ်ရန် ထိုသို့ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ် Drake (ဟုတ်ကဲ့, ထိုကျော်ကြားသောကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်မကြိုက်၏ meme), တတိယအဘို့အကျနော်တို့ကတူသောအခြားစပိန်စကားပြောအနုပညာရှင်မှပြန်သွားပါ J ကို Balvin, မြို့ပြဂီတ၏အခြားအိုင်ကွန်။ ဖျော်ရည် WRLD စတုတ္ထနေရာမှသွားနှင့် အဆိုပါ Weeknd ပဉ္စမနေရာ။
ဦး ခေါင်း Billie Eilish
ကျနော်တို့inတ္၏စွမ်းအားကိုသွားလျှင်, ငါတို့ရှာပါ Billy Eilish ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးအနုပညာရှင် ၅ ယောက်ထိပ်မှာ။ အလွန်ဂရုစိုက်မှုကင်းမဲ့စွာဆက်လက်ပြသခဲ့ပြီးဒုတိယနှစ်တွင်အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်အဖြစ်အများဆုံးနားထောင်ခံရသူဒီအနုပညာရှင်အတွက် ၁၈ နှစ်။ သူ၏အယ်လ်ဘမ်ကိုမလွတ်ပါစေနှင့် 'ငါတို့အားလုံးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါဘယ်သွားမလဲ။ သောအရှိဆုံးနားထောင်အကြားထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယနေရာကိုသွားတယ် တစ် ဦး အသိအကျွမ်းနှင့်အတူ တေလာဆွစ်ဖ် သူ၏အယ်လ်ဘမ်နှင့်အတူ 'လူထုပုံပြင်များ', Ariana Grande သူနှင့်အတူတတိယရာထူး'အခန်းထဲမှာ Dua Lipa y Halsey အရာပဉ္စမအဆင့်။
ငါတို့ရှာပြီးပြီဆိုရင် အများဆုံးနားထောင်ထားသောသီချင်းများခဲ့ကြသောငါသိ၏, 'အလင်းအမှောင်နားထောင်သူ ၁.၅ ဘီလီယံကျော်ဖြင့် The Weeknd မှပထမနေရာတွင်ရှိသည်။ ဒုတိယအနေအထားမှာ 'Dance မျောက်'Tones and I နဲ့တတိယနေရာမှာ'အဆိုပါထောင့်ကွက်Roddy Ricch အားဖြင့် '' ။ ၂၀၂၀ Spotify မှာနားထောင်တဲ့သီချင်း ၅ ပုဒ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။နှင်းဆီပန်း - Imanbke Remix'SAINt jHN နှင့် Imanbek တို့ကစတုတ္ထနေရာနှင့်ပဉ္စမနေရာတွင်'အခုမစပါနဲ့Dua Lipa အားဖြင့် '' ။
ဘယ်လိုမကောင်းတဲ့ယုန်ဟာဖြစ်ပါတယ် စပိန်မှာလည်းနံပါတ်တစ်ပြီးတော့ဒုတိယနေရာကိုသွားတယ် Anuel AA ကို, နောက်မှလိုက်နေသည်မှာ J ကို Balvin, Ozunaနှင့် Myke မျှော်စင်။ Spotify မှအထူးအာရုံစိုက်ရသောအနုပညာရှင်အမျိုးသမီးများသည်ပထမဆုံးဖြစ်သည် KAROL, G, စပိန် Aitana, Natti natashaနှင့် Lola မဲနယ်.
အိုမာ Montes သူသည်စပိန်အနုပညာရှင်နှင့်မြို့ပြအသံများထဲမှခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အဖြစ်အများဆုံးနားထောင်ခံရသည် flamenco နှင့်ရောနှော; လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့အား Spotify ကဤအမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းပြီးဤသီချင်းစာရင်းကိုရှာတွေ့နိုင်မည့်နေရာအသစ်ကိုသင်ပြပြီးဖြစ်သည်။ 'Flamenco + Flow'' ။
ပြီးတော့ဘယ်ဟာလဲဆိုတာသိချင်ရင် သူတို့ဟာကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာအများဆုံးနားထောင်ခဲ့တဲ့သီချင်းတွေပါသွားကြစို့ "တူဆာ» KAROL G မှ Nicki Minaj နှင့်ဒုတိယ၊ထထွန်း» Fred de Palma နှင့် Ana Mena တို့၏တတိယနေရာတွင်la Jeepeta - Remix» Nio Garcia, Anuel AA, Myke Towers, Brray နှင့် Juanka မှ,သကြားလုံး»စတုတ္ထနေရာအတွက် Ozuna၊သိချင်စိတ်» Jay Wheeler, DJ Nelson နှင့် Myke Towers မှပြုလုပ်သည်။
ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ အလွန်ခက်ခဲသောမြို့ပြဂီတကိုလည်းအာရုံစိုက်ပါ နှင့်အတူ: "ထောင်ပေါင်းများစွာထကွီလာ» Malaga မှ Chema Rivas မှ၊ «ခရမ်းရောင်J ကို Balvin အားဖြင့်»; «SaaferaBad Bunny၊ Jowel & Randy နှင့်Ñengo Flow မှ; «ဆက်ဆံရေး«, Sech မှစ။ «Dance မျောက်» Tones နှင့် I. အားဖြင့်
ထို့အပြင် ၂၀၂၀ Spotify ၏အသံလွှင့်ချက်များအများဆုံးနားထောင်ခဲ့သည်
The Daily သတင်းစာ
တစ်နှစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် Bad Bunny ဦး ဆောင်သောဂီတနှင့်ပြည့်နှက်နေသောဂီတနှင့်ပြည့်နေသည့်စပိန်စကားပြောဂီတ ၎င်းသည် Spotify နှင့်အရာရာတိုင်းအတွက်သန်းနှင့်ချီသောအသုံးပြုသူများကိုဆိုလိုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အခမဲ့ဂီတ » အများစုသည်အနုပညာရှင်များ၊ သီချင်းများနှင့် podcasts များဖြစ်သော ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Spotify ကိုနားထောင်ခဲ့ကြသည်
ကျွန်ုပ်သည်မိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်ကင်မရာ၏ထောက်လှမ်းမှုကိုခံနေရသည်ဆိုပါကမည်သို့သိရမည်နည်း
Android မှာ Google Chrome အတွက်လှည့်ကွက်အမျိုးမျိုး